कलाकारको चरित्रविरुद्धै कपिराइट ! « Kamana
कलाकारको चरित्रविरुद्धै कपिराइट !
नेपाल टेलिभिजनका लागि विभिन्न हास्य टेलिशृंखला निर्माण गर्ने मिडिया हबले जति जानेको छ, त्यति त कसैले जानेको छैन होला। हेर्नोस् त, वर्षौंदेखि यो हबले तीतो सत्य, जिरे खुर्सानी, मेरी बास्सै, भद्रगोलजस्ता विभिन्न हास्य टेलिशृंखला निर्माण गर्‍याे।
मिडिया हबको काम नै हो सिरियल निर्माण गर्ने, गरिरह्यो पनि। तर उसले सिरियल निर्माण गर्ने काम मात्र गरेन। सिरियल निर्माण गरिदिएबापत तीतो सत्य, जिरे खुर्सानी, मेरी बास्सै, भद्रगोलको टिमलाई पारिश्रमिक नै नदिने वा दिए पनि पूरा नदिने। काम पनि ग¥यो। यता विज्ञापन बजाएबापतको रकम विज्ञापनदाताबाट लिने, सिरियल टिमलाई भने रकम भुक्तानी नगर्नेे। नेपाल टेलिभिजनबाट टेन्डरअन्तर्गत समय लिने तर सिरियल प्रसारण गरेको रकम बक्यौतामा राख्ने। यस्तै कारण मिडिया हबका कार्यक्रम बन्द हुँदै गए। पछिल्लोपटक भद्रगोल कार्यक्रम पनि त्यसै गरी बन्द भयो।
आफूहरुले गरी खाने कार्यक्रम नै बन्द भएपछि यसको एक समूहले अर्कै एजेन्सीबाट नेपाल टेलिभिजनमै प्रसारण हुने गरी सक्किगोनी नामक सिरियल बनायो र प्रसारणमा पनि आयो। सिरियल छोटो समयमै हिट भएपछि मिडिया हबले सक्किगो नि टिमविरुद्ध आफ्ना क्यारेक्टरहरु नक्कल गरेको भन्दै प्रहरीमा कपिराइटको उजुरी दियो। हुइयाँ भने यो उजुरीबाट तीनछक परेको छ। कलाकारले निर्वाह गरेको आफ्ना चरित्रका सम्बन्धमा उनीहरुविरुद्ध नै कपिराइट लाग्छ र? हुइयाँलाई त यस्तो लाग्छ पाठक र दर्शकलाई चाहिँ के लाग्छ कुन्नि?